I-Tattoos ye-Lion Design Design for Men and Women-Tattoos Art Ideas
sonitattoo Julayi 6, 2016
Xa unengonyama yeengonyama, udla ukubonisa ubungqina benkokheli. Uloyikeka kwaye uphakamise. Siyazi ukuba iingonyama ziyaziwa ngesibindi, amandla kunye namandla. Ubukhosi buboniswa ngokucacileyo kule tattoo. Iingonyama zinokwenziwa ukugquma, zikhangeleke zinyani, zizolile kwaye zikhangele ingozi. Kuxhomekeke kwizinto ofuna kunye nendlela umculi ofuna ukubonisa ngayo izakhono zakhe kwesikhumba.
I-#lion tattoo isoloko ibukrakra kwaye ixoxa ngokuzikhukhumeza, isibindi, ubukhosi kunye namandla. Kukho iintlobo ezahlukeneyo ngokwezithethe. Inkunzi inokuthi ukucoceka, amandla, ubugqili, isibindi, ukunyaniseka, ukuzithoba, ukukhusela, ukunyaniseka, amandla, ubuqotho kunye negunya. Intsingiselo yombonyo wengonyama ibaluleke kakhulu, isizathu sokuba kutheni abantu abaninzi behlala befuna ukwazi ukubaluleka kwento abayiyo. Ubugcisa bubuhle kwaye bunokubambisa naluphi na ubugcisa bomzimba kwanamacala amancinci njengeminwe.
Iingcamango zokuthetha ngeengonyama zenza ukuba zibe ngenye yezona zinto zihamba phambili kwi-#tattoos ukuze zifakwe. Iingonyama ezimbini ezibuyiselwa emuva zixelele malunga nokuphuma kwelanga nokutshona kwelanga okanye nokuba iMpuma iza kudibana neNtshona. Inkunzi inokuthetha ngesikhokelo kwaye ibonakala kwezinye indawo ezingcwele okanye ezihloniphekileyo emhlabeni jikelele.
1. Kuhle sleeve ingcamango yeengonyama kubhinqa
2. Ingonyama enhle ngumbono we tattoo design yabasetyhini
Ngokungafani neempawu zeendlovu ezingezona ezidumeleyo, izidalwa zeengonyama zidalwe ngokugqithiseleyo kwiindawo ezininzi zeepattoo zokudlala. umthombo wesithombe
3. I-tattoo ye-tattoo ingcamango yabasetyhini ngasemva
4. Ibhongo elihle tattoo design ink inkcazo yamadoda kwiingalo
Unokugqiba ukuba unkulu kangakanani ufuna ukuba ingonyama yakho ibe yesikhumba sakho. Ngoxa uncedo lomculi onobuchule unesiqiniseko sokufumana le tattoo enhle elukhumbeni. umthombo wesithombe
5. Ibhubesi elibi ngombono we tattoo ngomyalezo; sukoyika
6. Impahla epheleleyo roses kunye nombono wengonyama yeengonyama kubafazi
Akukho hlobo lwe tattoo yengonyama oyikhethayo ayiyi kuba yinto emangalisayo. Ungasebenzisa umbala ohlukeneyo kwingonyama yakho ukuze uhluke kwizinto abanye abazisebenzisayo. umthombo wesithombe
7. emangalisayo umlo weengonyama zeengonyama zentombazana
Siza kukuxelela ukuba umbala kunye noyilo olukhethileyo yiyo eya kukwahlula kwabanye. Unokwazi ukudlala ngemibala kwi-mane, umlomo, amehlo kunye nalo lonke umzimba. umthombo wesithombe
8. I-tattoo yesandla ebhentshini yengonyama ingcamango yabantwana
Enye into ebalulekileyo yokuyikhethayo xa ufumana inki yendawo yokuhlala yendawo apho ingonyama ikwazi ukudibanisa khona. Xa unemvelaphi enemibala, uza kufumana ingonyama yebhubesi engabonakaliyo kwaye ingokoqobo. umthombo wesithombe
9. Ingqamlezo yebhongo yombhobho yomboniselo yembono yabantu
Simele sikuxelele ukuba iindleko zee tattoo ziyahluka. Ubukhulu obukhulu, bubiza kakhulu. umthombo wesithombe
10. Iintyatyambo ezimhlophe kunye nengonyama inkinobho ye tattoo kumantombazana kwisiqingatha sleeve
Ngoku ukuba ulungele ukuba naloo tattoo yengonyama, lixesha lokukhetha inxalenye yomzimba wakho ofuna ukuba. Akunjalo kuphela, akufanele nje ukhethe umculi ukwenza umzobo wakho. Umzobo ongalunganga unokubangela ubuhlungu obukhulu kunokuba uzonwaba. umthombo wesithombe
11. Ingonyama ebhongayo tattoo ngesandla ngcamango ya bafana
Iiwebhusayithi apho abanye abaculi babonisa khona umsebenzi wabo wokubonisa tattoo kunokuba indawo yokuqala ukukhangela umculi wakho ukuba unayo. umthombo wesithombe
12. I-Sleeve ehambelana neengonyama zengonyama yembono yabesifazane
Xa ufumana umculi, uya kufuneka uhambe kunye neenkcukacha zento ofuna ukuyifikelela ekupheleni kosuku. Okukhethiweyo kukukho konke. umthombo wesithombe
13. Iingonyama ezibhongayo inkinobho ye tattoo kumadoda esifubeni
Cofa apha ukuze uthole ezinye i-Lion Tattoos Design
utywala tattooukutshiza amathambosibinii-tattoosIintliziyo zeTattoostattooi tattootatto tattoosdesign mehndiizifuba zesifubaicompass tattooI-Ankle Tattoosiifatyambo zeentyatyamboihoi fish tattooiidotingombonotattoo engapheliyotattoos ezinyawocute tattoosizithunywa zezuluiimpawu zezodiac zempawutattoos zenyangazomculo tattoosngesandlaIndlovu yeendlovutattozengalo zengaloowona mhlobo womhloboTattoos zeJometritatto flower flowertattoo yamehlotattoo yedayimanitattoosbathanda i tattoostattoos zelangatattoosIintyatyambo zeTattooiifotto zentamoiipattoostattoos kumantombazanatattoos kubantutattooizigulanetattoosi-cherry ityatyambotattoos zohlangaiifoto eziphakamileyotattooszinyonitatna tattoo